कांग्रेस महाधिवेशनः केन्द्रीय नेतृत्वमा विराटनगरका आकांक्षीको ओइरो :: राजु अधिकारी :: Setopati
नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशनमा विभिन्न पदका आकांक्षीको दौडधुप उत्कर्षमा छ । उम्मेद्वारी घोषणा सिलसिला पनि जारी छ। यहीँ क्रममा विराटनगरको एकै भूगोलबाट मात्रै कांग्रेस केन्द्रमा दाबी गर्नेहरुको लर्को लागेको छ ।
नेपाली काँग्रेसको संस्थापक कोइराला परिवारको बासस्थल र राणाविरोधी आन्दोलनको उद्गम थलो मानिने विराटनगरलाई कांग्रेस कार्यकर्ता पार्टीको ‘तिर्थस्थल’ मान्छन्। त्यहीँ पुरानो विरासतको जगमा हुर्किएका धेरै नेताहरु भएकै कारण कांग्रेसमा नेतृत्व आकांक्षा राख्नेहरु विराटनगरमा धेरै भएको काँग्रेस नेताहरु बताउँछन्।
कोइराला परिवारका राजनीतिक उत्तराधिकारी डा. शेखर कोइराला सभापतिको दौडमा छन् । संस्थापन इतर समूहमा सहमति प्रयास जारी छ। विराटनगरस्थित कोइराला निवास सम्हाल्ने जिम्मेवारी लिएका उनी कांग्रेस पनि सम्हाल्ने अभिलाषाले दौडमा छन् ।
विराटनगरकै अर्का कांग्रेस नेता महेश आचार्य उपसभापतिको दौडमा छन्। केही दिनअघि विराटनगरस्थित निवासबाट औपचारिक रुपमा उम्मेद्वारी घोषणा गरेका आचार्यले पार्टीलाई वैचारिक नेतृत्व दिने दाबी गर्दै आएका छन्। गिरिजाप्रसाद कोइरालाकी पुत्री सुजाता कोइराला पनि सधैं नेतृत्वको दाबेदार मानिन्छिन्। यसपटक पनि उनले सभापतिमा लामो समय दाबी गर्दै आएकी छन्। यद्यपि केही दिनयता सभापतिका रुपमा उनको चर्चा कम भएको छ ।
सभापतिमा कोइराला र उपसभापतिमा आचार्यले दाबी पेश गरिरहँदा विराटनगरकै अर्का नेता डा. मिनेन्द्र रिजाल महामन्त्री दाबी गरिरहेका छन् ।
पार्टीको मुख्य पदाधिकारीमा दाबी गरिरहेका यी तीन जनै नेता संस्थापन इतर समूहका हुन् । संस्थापन पक्षमा रहेकी नेतृ डा.डिला सङ्ग्रौलाले पनि सहमहामन्त्रीमा उम्मेदवारी घोषणा गरेकी छन् । उनी पनि विराटनगरकै बासिन्दा हुन् ।
पदाधिकारीबाहेक केन्द्रीय सदस्यमा दाबी गर्ने आकांक्षीहरुको त ओइरो नै छ विराटनगरमा ।
संस्थापन पक्षमै रहेका केन्द्रीय सदस्य रहेका अमृत अर्यालले पुनः केन्द्रीय सदस्यमा उठ्ने बताएका छन् । कांग्रेसको आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्य रहेका विराटनगरका हसन अन्सारी पनि केन्द्रीय सदस्यको दाबेदार छन्।
विराटनगर महानगरपालिकाका मेयर भीम पराजुलीले पनि केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्। पहिले डा. शेखर कोइराला निकट रहेका उनले अहिले कृष्णप्रसाद सिटौलाको टिमबाट केन्द्रीय सदस्यमा उठ्ने तयारी गरेका हुन्।
महानगर उपप्रमुख इन्दिरा कार्की पनि केन्द्रीय सदस्यमा उठ्ने घोषणा गरेकी छन् । उनी संस्थापन इतर समूहमा छिन्।
कोइराला टिमबाट प्रदेश १ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री केदार कार्की पनि केन्द्रीय सदस्यका दावेदार छन्।
मुलुककै सबैभन्दा पुरानो दलमा एकै सहर र भूगोलबाट यतिधेरै दाबेदार किन ? यसले अन्यत्रकालाई अन्याय हुँदैन ? ‘नेपाली काँग्रेसको उद्गम थलोमा लिगेसीका आधारमा पनि धेरै पुरानो परिवारहरु सक्रिय रहँदै आएका छन्,’ केन्द्रीय सदस्यमा दाबी गरेका एक नेता भन्छन् ‘त्यसैले यहाँबाट धेरै जनाको दाबी स्वाभाविक छ ।’
प्रकाशित मिति: बिहीबार, मंसिर २३, २०७८, ०७:१३:००